Fadeexad ku soo baxday Garsoorihii kulankii Morocco iyo Portugal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Fadeexad ku soo baxday Garsoorihii kulankii Morocco iyo Portugal?
(22-6-2018) Garsoorihii dhexdhexaadinayey ciyaartii xulka qaranka Portugal uu 1-0 kaga adkaaday Morocco ee sababay in dalkii ugu horreeyey ay ka hadhaan Koobka Adduunka ayaa la ogaaday inuu dhinac ahaa oo aanu caddaalad u haynin ciyaarta.
Ciyaaryahannada iyo tababaraha xulka qaranka Morocco ayaa si adag uga diiday go’aamo lid ku ah oo uu garsoore Mark Geiger qaatay, kaas oo uu ku jiro goolka lagaga badiyey ee uu dhaliyey Cristiano Ronaldo oo lagu tilmaamay inuu gacan ahaa, hase yeeshee garsooraha iyo nidaamka VAR aanu midkoodna ka jawaab celinin.
Garsoore Mark Geiger oo u dhashay waddanka Maraykanka ayaa markii qaybta hore ee ciyaartu dhamaatay si badheedh ah u caddaystay inuu la safnaa xulka qaranka Portugal, waxaana uu u tegay difaaca reer Portugal ee Pepe oo uu weydiistay inuu siiyo funaanaddii uu xidhnaa ee uu ku ciyaarayey.
Xiddiga xulka qaranka Morocco ee Nouradin Amrabat ayaa si adag u weeraray garsoore Geiger, waxaana uu tibaaxay in aanu dhex ka ahayn ciyaartii lagu reebay.
“Ma garanayo wixii uu qabanayey, laakiin wuxuu aad ula dhacdsanaa Cristiano Ronaldo, waxaanan maqlayey isaga oo Pepe weydiisanaya garanka wakhtigii nasashada.” Sidaas waxa yidhi Amrabat oo goob joog u ahaa markii uu garsooruhu shaadhka weydiisanayey Pepe.
Amrabat oo u warramay telefishanka NOS, waxa uu tibaaxay in Koobka Adduunka aan loo baahnayn in arrimo noocan oo kale ah ay dhacaan, hase yeeshee waxa uu dhinaca kale xusay in jewiga garoonkii ay ku ciyaarayeen uu aad u kululaa oo uu dhididku qooyey ciyaaryahannada.
“Aad ayay u kululayd, dhididka ayaa naga da’ayey, hawaduna way taagnayd. Subaxnimada markii aan kacay, waxa aan tegay dhakhtarka, waxaanan u sheegay inaan maanta (shalay) ciyaarayo, fiicnaan ayaan dareemayay inkastoo aan dareemayay daal ka badan intii caadiga ahaa. Hadda waa inaan nasto, koobka adduunkana kusoo xidho si wanaagsan.” Sidaas ayuu yidhi Amrabat oo marka ciyaartooda u dambaysa ay Spain la yeeshaan June 25 shandadoodiisa u xidhxidhan doona waddankiisii.